Eden Hazard Oo Faahfaain Ka Bixiyey Farqiga U Dhexeeya Kooxdiisii Hore Ee Chelsea Iyo Real Madrid - Gool24.Net
Eden Hazard Oo Faahfaain Ka Bixiyey Farqiga U Dhexeeya Kooxdiisii Hore Ee Chelsea Iyo Real Madrid
Xiddiga reer Belgium ee Eden Hazard ayaa taageereyaashiisa u iftiimiyey farqiga u dhexeeya kooxdiisii hore ee Chelsea iyo naadiga uu xagaagii ku biiray ee Real Madrid.
Hazard ayaa Real Madrid ay xagaagii tegay kaga iibsatay Chelsea lacag dhan £130 milyan, waxaana uu sidaa kusoo afjaray toddoba sannadood oo uu soo xidhnaa funaanadda Blues oo uu kaga soo biiray naadiga Faransiiska ah ee Lille.
Hazard waxa uu kula guuleystay Chelsea laba horyaal oo Premeir League ah, Laba Europa League iyo koobab kale oo maxalli ah, hase yeeshee waxa uu ugu dambayntii u dhaqaaqay inuu rumeeyo riyadiisa oo uu ku biiro kooxdii uu carruurnimadiisii ku riyoon jiray inuu u ciyaaro ee Real Madrid.
29 jirkan ayaa dhaawacyo ragaadiyeen xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey, laakiin haddana kama gabbanin inuu sharraxo farqiga u dhexeeya Real Madrid iyo Chelsea.
“Chelsea, marka aanu guul-darraysano, waanu niyad-jabi jirnay sida taageereyaasha oo kale, laakiin marna maan dareemin inaan musiibo ku jiro. Spain sidan way ka duwan tahay.” Ayuu yidhi Eden Hazard.
“Halkan taageereyaashu, waa taageereyaal dhab ah, kubadda cagta ayaana wax walba u ah, waxaanay u baahan yihiin ciyaartooyo wax walba u huro, halka Ingiriiska aanay taageereyaal badan oo sidaas ahi joogin. Dabcan, dadka halkaa jooga (England) sida kubadda cagta iyo qof kasta oo kale, sida da’yarta, waayeelka ama dhallinayrada, waxay si dhab ah u xiiseeyaan kubadda cagta, laakiin kooxahoodu sidaa taantaastik uma aha.” Ayuu raaciyey.
29 jirkan reer Belgium waxa kale oo uu ka hadlay sida uu Zidane u ahaa qofka uu ciyaartiisa ku daydo iyo sida uu Real Madrid ugu riyoon jiray, waxaanu yidhi: “Waxaan dareemaa sidii aan canug yar ahay, sababtu maaha isaga (Zidane) laakiin ciyaartoyda kale ee halkan jooga. Wax ayaan baranayaa maalin walba, iyga ayaanan wax ka ogaanayaa. Waa tababare wanaagsan oo lala shaqeeyo oo ku dareensiin karaya inaad tahay ciyaartoy marka aad la hadlayso, waxaanan u baahanahay inaan wax ka barto Zidane.”
Hazard oo hadda kasoo kabanaya dhaawac sababay in qalliin lagaga sameeyo kuraanta oo loo qaado waddanka Maraykanka, waxa kale oo uu sii faahfaahiyey farqiga u dhexeeya shirarka jaraa’id ee gudaha waddanka Spain iyo Ingiriiska, waxaanu yidhi: “Waxa u dhexeeya shirka saxaafadda, waxaad arkaysaa taageereyaasha iyo muraayadaha oo dhan, madaxweynaha ayaa hadal jeedinaya, laakiin kaamiriyoonka oo dhan adiga ayay ku hayaan.
“Runtii ma sifayn kartid, waxaad dareemaysaa farxad, waana wax wanaagsan, si kastaba, xogaa deggenaansho la’aan ah ayaad daareemaysaa marka dadka oo dhan ay kusoo fiirinayaan, gaar ahaan marka aa ku anaagsan tahay garoonka.”